Imoto ePhakamileyo ePhakamileyo yokuPhakamisa iRubber Pad yoMvelisi kunye neFektri | IsiTonghe
Izithuthi ezinesipili esine-clip-welding ezibekwe kwiipads zerabha eziqhelekileyo zinokukrwela ngokulula okanye zahlule iiphedi zerabha. Kwangaxeshanye, kulula ukwenza umonakalo kwimithi emide kumzimba wesithuthi odibeneyo.
Icandelo eliphambili leLP-1 yeRubber Pad yi-polyurethane. Umphezulu unzima, awunako ukumelana ne-oyile kunye nokubola. Yenzelwe iiprooves ezinqamlezileyo nezithe nkqo. Inokubekwa ngokuthe tye okanye ngokuthe nkqo ngokweemodeli ezahlukeneyo. Ikliphu ye-welding track ifakwe kwi-groove enqamlekileyo yokuyixhasa ngokukhuselekileyo. Phakamisa umbhinqo wesithuthi ukhulule uxinzelelo lwengoma edibeneyo kwi-Rubber Pad, unikezele ngenkxaso eyongezelelweyo kwisithuthi, uthintele amabala eoyile ekunciphiseni iphedi, kwaye unokwandisa kakhulu ubomi benkonzo yephedi yerabha. Kwangelo xesha, umzila we-clamp-welding uye wonakaliswa kwisithuthi. Kukwakhuseleko oluhle kakhulu kwaye kuphucula ukhuseleko lokuphakamisa.
Egqithileyo Ukuphakanyiswa kweemoto eziPhathwayo ngokukhawuleza
Okulandelayo: Imoto ePhathekayo ePhakamileyo yokuPhakamisa iiNdonga eziMiselweyo
Ukuphakamisa iMoto ngeRubber ngokukhawuleza
Ukuhanjiswa kweemoto eziPhathwayo ngokukhawuleza
Iposti engatshatanga yokunyusa ingroud L2800 (A) ixhotyiswe nge ...
Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Isilinda esibambeleyo esinye, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi,